Ahoana ny fomba hanampian'ny Twitter anao hitarika fifandonana lalindalina | Martech Zone
Ahoana ny fomba hanampian'ny Twitter anao hitarika fifampiraharahana lalindalina kokoa
Alatsinainy, Septambra 15, 2014 Douglas Karr
Misy tetezamita goavana mitranga eo amin'ny sehatry ny media sosialy izay manaitaitra tokoa. Ny fahaizana manosika ny fifamofoana mivantana amin'ny fifandraisana ara-tsosialy fa tsy mila mamerina ny fifamoivoizana hiverina amin'ny tranokalanao. Fantatry ny rehetra fa isaky ny mangataka olona iray ianao hanao tsindry dia misy ny fidinana an-jotra amin'ny tahan'ny valiny.
Ho an'ny orinasa iray mampiroborobo ny vokatra na serivisiny ao amin'ny Twitter, ny fandefasan'ny mpampiasa ny sioka fivarotana, ny pejin'ny vokatra, ny pejy "add to cart", ny pejy fandoavam-bola, ny fividianana farany dia miteraka fandaozana avo kokoa. Twitter dia manampy amin'ny famoahana mahafinaritra ny Karatra Twitter ary ny Vidio amin'ny Tweet bokotra.
Karatra Twitter avelao ny mpivarotra hametaka sary, horonan-tsary ary traikefa amin'ny haino aman-jery matanjaka mba hisarika ny firotsahana. Ity misy ohatra a Karatra mpilalao:
Mampifandray sy mahita: ny tantara Twitter ao amin'ny 1:40 http://t.co/TRRiDAbkUR
- Doka amin'ny Twitter (@TwitterAds) Novambra 8, 2013
Raha te hizaha toetra ianao Karatra Twitter nivoaka, Igniter - mpiara-miasa amin'ny Marketing Marketing Twitter - dia namoaka vahaolana beta amin'ny fomba fitantanana fitantanana atiny. Ireo mpivarotra dia afaka mamorona karatra sy pejy itodiana nefa tsy manoratra kaody amin'ny alàlan'ny interface-dry zareo. Ireo mpanao dokam-barotra mikasa ny hitondra vokatra avo lenta toa ny fijerena horonan-tsary, ny fitarihana loholona, ​​ary ny fividianana dia afaka mamorona karazany maro mora foana hahitana fitambarana lohateny, sary, kopia, URL, ary bokotra hiantsoana ny hetsika.
Mpamorona atiny amin'ny karatra Twitter
Topi-maso ny votoatin'ny karatra Twitter
Igniter ny ny pejy itodiana manokana dia tonga miaraka amin'ny tag fiovan'ny Twitter efa tafiditra. Ireo mari-pahaizana momba ny fiovam-po ireo dia ahafahan'ny mpivarotra manara-maso ny fiovam-po manerana ny fitaovana sy ny fitsidihana marobe, izay tsy nety tamin'ny fanaovana dokambarotra niomerika, ny maodelin'ny lookalike, izay manatsara ny fahombiazan'ny doka azo. ary miverina mamerina amin'ny finday sy manerana ny fitaovana.
Vidio amin'ny Tweet
Twitter koa dia manandrana a bokotra mividiana mivantana mivantana ao anatin'ny renirano, fandrosoana mahaliana ho an'ireo matihanina amin'ny ecommerce. Tsy mahaliana fotsiny izany satria mora ny fampiasana azy, tsara ihany koa satria ny mpanjifa dia afaka mitazona ny mombamomba ny fandoavam-bola amin'ny Twitter ary tsy mila mampiditra ny fampahalalana hatrany isaky ny fivarotana tadiavin'izy ireo hiarahana aminy.
Ity dia dingana iray eo am-piandohana amin'ny fananganana Twitter ka hahatonga ny fiantsenana amin'ny fitaovana finday ho mora sy mora, antenaina fa hahafinaritra mihitsy aza. Ny mpampiasa dia hahazo ny fidirana amin'ny tolotra sy ny varotra tsy azon'izy ireo aleha amin'ny toeran-kafa ary afaka mihetsika amin'izy ireo amin'ny fampiharana Twitter ho an'ny Android sy iOS; ny mpivarotra dia hanana fomba vaovao hanovana ny fifandraisana mivantana izay haorin'izy ireo amin'ny mpanaraka azy ho lasa mpivarotra.
Tags: mividy amin'ny bitsikaignitermixpokaratra mpilalaoShopIgniterTwitterbokotra mividy twitterkaratra twitterMpiara-miasa amin'ny sehatra marketing Twitter
Mahazo tombony amin'ny horonantsary sosialy ve ny orinasanao?